Malunga nathi -I-Shuiyuan New Energy Technology Co, Ltd
Yasekwa ngonyaka ka-2000, Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd ibekwe kwiphondo Shandong, sibe nembali iminyaka engama-20 ngenxa yemichiza synthesis entle, iikhemikhali organic, arhente abangabancedani imichiza. I-Dibenzoylmethane (DBM) kunye ne-furfural. Inkampani ngoku iqesha abasebenzi abangama-350, kubandakanya abaphumeleleyo kwikholeji kunye neenjineli ezingama-21 kunye neengcali zoqoqosho ezi-5. Zinezixhobo ezine zesebe, iLiaocheng shuiyuan furfural manufactory, Juyeluyuan furfural biochemical manufactory , I-Shangqiu juyuan chemical manufactory kunye ne-Liaocheng shuiyuan iteknoloji yamandla e-manufactory.The inkampani yezobugcisa inamandla, uvavanyo luthetha ukuba lufezekile kwaye izixhobo zokuvelisa zibalaseleyo.
Oko sikwenzayo ?
Njengenye yezona mveliso zinkulu zehlabathi zeDibenzoylmethane (DBM) mveliso onomthamo wonyaka weetoni ezili-10 000, njengenye yezona mveliso zinkulu ehlabathini ezinomthamo wonyaka weetoni ezingama-30,000. Iimveliso ikakhulu zisebenzisa i-methanol kunye ne-acetic acid evela kwizikhwebu zombona, ezisetyenziswa kwimveliso ye-Dibenzoylmethane kunye ne-furfural, uluhlu olubanzi lokusetyenziswa, ikakhulu i-furfural alcohol resin yeyeza kunye nemveliso yeekhemikhali entle kwimimandla. Iimveliso zendalo zingasetyenziswa kwimveliso yamayeza, I-furfuryl yotywala, iziqholo, iincasa, iizimba kunye nezinye iimveliso.
Yintoni esivelisa yona ikakhulu?
Sinjani iSiseko seMveliso yethu ？
It is a mveliso ka-83,916 square metres kuquka 50,000 square metres workshop space.Company unabasebenzi abangaphezu kwama-350, amandla zobugcisa olomeleleyo, unalo ngobungcali inxaxheba kuphando imveliso entsha kunye neqela lobugcisa nophuhliso, kwaye ugcine intsebenziswano ngokusondeleyo kumaziko ophando lwezenzululwazi ezininzi zasekhaya. Siyabambelela kwingcinga yenzululwazi nethekhinoloji kunye nokukhuselwa kwendalo esinganyanzelekanga somlilo esincedisayo se-PVC sokuzinzisa ubushushu iDibenzoylmethane (DBM) kunye nefuraldehyde kunye nemveliso yeemveliso ezinoboya kunye nentengiso yenkampani yokuvelisa amandla eetoni ezingama-40,000, inkampani inemveliso yetekhnoloji ephambili kwihlabathi Umgca kunye nezixhobo zemveliso ezinkulu zeDibenzoylmethane (DBM), umgangatho wemveliso ufikelele kwinqanaba eliphezulu lehlabathi.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi nge-imeyile yethu:
ukuba unayo nayiphi na imibuzo, siya kuzama ukuphendula zingaphelanga iiyure ezili-12.